कसरी सफलतापूर्वक तपाइँको अनलाइन लक्षित दर्शकहरु सम्म पुग्न - Victor Mochere
डिजिटल मार्केटरहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो संघर्ष कसरी लक्षित दर्शकहरूलाई प्रभावकारी रूपमा पुग्ने हो। यो एक ठूलो संघर्ष हो, यद्यपि त्यो डिजिटल मार्केटिङको मुख्य लक्ष्य हो। यो डिजिटल मार्केटरको लागि सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य पनि हो किनभने तपाईले आफ्नो कम्पनी के हो र यसले मानिसहरूलाई के प्रस्ताव गर्न सक्छ भनेर मार्केट गर्न सक्नु अघि, यो पहिले लक्षित दर्शकहरूमा पुग्न आवश्यक छ।
केवल गलत दर्शकहरूलाई आफ्नो उत्पादन मार्केटिङ कल्पना गर्नुहोस्। तपाईं यहाँ र त्यहाँ ध्यान आकर्षित गर्न सफल हुन सक्नुहुन्छ, तर अन्ततः, कसैले पनि तपाईंको सेवाहरू वा उत्पादनहरू किन्न सक्दैन किनभने तिनीहरूलाई तिनीहरूको आवश्यकता छैन। यसले समय र पैसाको ठूलो बर्बादी हुनेछ। त्यसले भन्यो, तपाइँ तपाइँको उत्पादनहरु र सेवाहरु लाई प्रभावकारी रूपमा मार्केट गर्न को लागी, तपाइँको लक्षित दर्शकहरु सम्म पुग्न को लागी केहि सुझावहरु यहाँ छन्।
1. पहिले आफ्नो लक्षित दर्शक परिभाषित गर्नुहोस्
2. तपाईका ग्राहकहरू के चाहन्छन् भनेर पहिचान गर्नुहोस्
3. तपाईंका ग्राहकहरूले तपाईंको सामग्री कसरी प्राप्त गर्न चाहन्छन् भनी विचार गर्नुहोस्
4. प्रभावकारी लाभ उठाउनुहोस्
5. ह्यासट्याग प्रयोग
एक गैर-वार्तालाप योग्य माइन्डफुलनेस सुझावहरू जसले अनलाइन बिक्री चलाउँछ तपाइँको लक्षित दर्शकहरूलाई पहिचान गर्नु हो। तर, तपाईंको लक्षित दर्शकहरूमा पुग्नु अघि, तपाईंले तिनीहरूलाई पहिले चिन्नुपर्छ। तपाईं आफैलाई एक ग्राहक व्यक्तित्व निर्माण गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो ग्राहक व्यक्तित्व तपाइँका ग्राहकहरु को एक सामान्य प्रतिनिधित्व हुनेछ र उनीहरु कसरी कार्य गर्नेछन्। तपाईं आफ्नो जनसांख्यिकी र तिनीहरूको मनोवैज्ञानिक विशेषताहरू हेरेर यसलाई निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ।
उदाहरणका लागि, मानौं तपाईं प्लम्बर हुनुहुन्छ। निस्सन्देह, तपाइँको आदर्श ग्राहक कोही कोही हुन सक्छ जसलाई प्लम्बर चाहिन्छ, एक वा आफ्नो प्लम्बिंग प्रणाली संग धेरै समस्याहरु संग। प्लम्बरको सख्त आवश्यकता भएको ग्राहकको रूपमा, तिनीहरू सधैं पहुँचयोग्य र छिटो समस्या समाधान गर्ने सीप भएको प्लम्बर चाहन्छन्। एकचोटि तपाईंले आफ्नो ग्राहकको सामान्यीकरण सेटअप गरेपछि, तपाईंले आफ्नो सेवाहरूलाई त्यो विशेषतालाई ध्यानमा राखेर मार्केट गर्न सक्नुहुन्छ। यस रणनीतिको साथ, तपाईंसँग थप रूपान्तरण र नेतृत्वहरू हुन सक्छन्, र तपाईंले आफ्नो राजस्व बढाउनुहुनेछ।
यदि तपाइँ ग्राहकहरूले तपाइँको अनलाइन के भन्नुहुन्छ सुन्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँको वेबसाइटमा रहेको सबैभन्दा सामान्य प्रश्नहरूको बारेमा सामग्री प्रकाशित गर्नु ठूलो मद्दत हुनेछ। निस्सन्देह, यो तपाइँको ग्राहक के चाहन्छ थाहा बिना यो गर्न असम्भव हुन गइरहेको छ। ग्राहक सर्वेक्षणहरू, सामाजिक सुनुवाइहरू, र किवर्ड अनुसन्धानको साथ, तपाईंका ग्राहकहरूले प्राय: के खोज्छन् र त्यसको बारेमा अनुसन्धान गर्न सजिलो समय पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंका ग्राहकहरूले के ख्याल राख्छन् भन्ने कुरा थाह पाएर, तपाईंले आफ्नो ब्रान्ड जागरूकता निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ एक जानकार अधिकारी हुन जो विश्वसनीय छ र ग्राहकहरूलाई बुझ्दछ।
एकचोटि तपाईलाई थाहा छ कि तपाईका ग्राहकहरूले वास्तवमा के हेरचाह गर्छन्, तपाईले अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ र निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाई कसरी आफ्नो सामग्री आफ्ना ग्राहकहरूलाई रिले गर्न चाहनुहुन्छ। के तिनीहरू लेखहरू रुचाउँछन्? भिडियोहरू? इन्फोग्राफिक्सको बारेमा कसरी? न्यूजलेटरहरूको बारेमा के हो? जब तपाइँ अन्ततः तपाइँका ग्राहकहरूले तपाइँको सामग्री उपभोग गर्न मनपर्छ भनेर थाहा पाउनु हुन्छ, तपाइँ तपाइँको सामग्रीलाई उनीहरूको मनपर्ने ढाँचामा आधारित बनाएर त्यो विशेष अवसरमा फोकस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँका ग्राहकहरु लाई रिले गर्न को लागी सामग्री को सबै भन्दा राम्रो माध्यम फेला पार्न को लागी, तपाइँ यो पनि थाहा पाउनु पर्छ कि तपाइँ कसरी उनीहरु संग प्रतिध्वनि गर्न चाहानुहुन्छ।
के तिनीहरूले तपाईंको हास्यलाई राम्रोसँग प्रतिक्रिया दिन्छन्, वा तिनीहरू थप आरक्षित र आधिकारिक टोन रुचाउँछन्? के तिनीहरू धेरैजसो उद्योग शब्दजालको बारेमा सहज र जानकार छन्, वा तिनीहरू थप सामान्य सर्तहरू चाहन्छन्? तपाईंको सामग्रीको लागि सही टोन अपनाउनु भनेको तपाईंका ग्राहकहरूलाई थप जोडिएको र सहज महसुस गराउनको लागि कुञ्जी हो, उनीहरूलाई अझ सुने र बुझेको महसुस गराउन।
प्रभावकारीहरूको उदयको साथ, डिजिटल मार्केटरहरूले द्रुत रूपमा प्रभावकारी मार्केटिङ भनिने डिजिटल मार्केटिङको शैली अपनाए। यो गर्नको लागि, तपाईंले आफ्नो कम्पनीको आलासँग सम्बन्धित लोकप्रिय व्यक्तिहरू फेला पार्न आवश्यक छ। प्रभावकारी मार्केटिङ एक धेरै सरल तर धेरै प्रभावकारी मार्केटिङ प्रविधि हो जसले तपाईंलाई एकल चालमा मार्केटिङ लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यदि तपाइँको पार्टनर तपाइँको कम्पनीको आला बारे सम्बन्धित र जानकार छ भने, तपाइँ धेरै सम्भावित ग्राहकहरु सम्म पुग्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको कम्पनी मा रुचि हुन सक्छ र यो के प्रस्ताव गर्दछ।
यसले तपाईंको लक्षित दर्शकहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा पुग्नको साथसाथै योग्य नेतृत्व उत्पादन र रूपान्तरणको लागि अनुमति दिन्छ। राम्रोसँग व्यवस्थित र राम्ररी निष्पादित प्रभावकारी मार्केटिङ अभियानले तपाईंको ब्रान्डलाई धेरै मानिसहरूमा पुग्न मद्दत गर्न सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईंले छनौट गर्नुभएको प्रभावकारको पहिले नै ठूलो फलोवर छ। र उल्लेख नगर्नुहोस् कि यो प्रायः सस्तो छ, जसको मतलब तपाईं बैंक तोड्न बिना धेरै मार्केटिङ लक्ष्यहरूमा पुग्न सक्नुहुन्छ।
धेरै जसो मानिसहरू आजकल सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूमा आफ्नो धेरै समय बिताउने क्रममा, त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन तपाईंले तिनीहरूलाई मार्केट गर्न सक्नुहुन्छ: ह्यासट्यागहरू। सान्दर्भिक र उद्योग-विशेष ह्यासट्यागहरूले तपाईंलाई दर्शकहरूको लागि आफ्नो पहुँच फराकिलो बनाउन र तपाईंको कम्पनीको स्थानमा रुचि राख्ने थप व्यक्तिहरू फेला पार्न मद्दत गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, तपाईंसँग लक्जरी होटेल ब्रान्ड छ भने #luxurytravel वा #luxuryaccommodations जस्ता ह्यासट्यागहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
डिजिटल मार्केटिङ फराकिलो छ, र त्यहाँ धेरै अवसरहरू छन् जसले तपाईंलाई तपाईंको लक्षित दर्शकहरूमा पुग्न मद्दत गर्न सक्छ। यद्यपि, रचनात्मकता र बुद्धि बिना, तपाईंको ब्रान्ड बासी हुनेछ र समय बित्दै जाँदा धेरै दर्शकहरूमा पुग्न सक्दैन। तपाईंको लागि बजारमा सही उपकरणहरू प्रयोग गरेर, तपाईंले धेरै उत्पन्न लिडहरू र रूपान्तरणहरू उत्पन्न गर्नुहुनेछ।